Ogaden News Agency (ONA) – Xinua – Booliska Kenya oo Gacanta ku Dhigay Shan Dambiile
Xinua – Booliska Kenya oo Gacanta ku Dhigay Shan Dambiile
Booliska Keya ayaa shaaca ka qaaday shalay oo Axad ahayd inay qabteen shan qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dilalkii gilgilay waqooyiga Kenya, gaar ahaan magaalada Gaarisa oo weeraro argagixis ay horey uga dheceen. Sidaa waxaa qortay shabakadda Shiinaha ee Xinhua. (Halkan ka akhri)
Waxaa kaloo ay sirdoonka Kenya faafiyeen aqoonsiyada niman khatar ah oo shan qof dilkooda ka dambeeyay labadii bilood ee lasoo dhaafay.
Taliyaha qaybta dambi-baadhista gobolka (CID) Musa Yego ayaa u sheegay shabakadda Xinua in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay booliska wareysinayeen saddex Itobiyaan iyo laba Kenyan ah oo loo qabtay weeraro bambooyin ah oo ka dhacay magaalada Garisa.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ogaanay hadda dilal aan horey loo ogayn cidii ka dambaysay oo cabsi ku riday magaladadanada labadii bilood ee lasoo dhaafay.” Ayuu yidhi Yego. Wuxuu intaa raaciyay;
“Waxaa ku jira dadka aan qabanay saddex Itobiyaan ah oo ka yimid gobolka Somalida, iyo laba kale oo Kenyan ah oo kala ah Taksiile iyo guryaha mid kireeya.”
Wuxuu sheegay Yego inuu Taksiilaha ku caawinayay dadkan dilalka gaystay inuu gaadhsiiyo meelaha ay doonayaan markay falalka ka fulinayaan magaalada, meesha uu midka kalena uu hoy siiyay dambiilayaashan oo uu ka kireeyay guryo isagoon soo wargalinin haya’adaha nabadgalyada joogitaankooda sharcidarada ah ay dalka ku jogaan.
Waxaa aad uga caawiyay baadhitaanka socda midkii ay dadweynaha soo qabteen Arbacadii waqti yar ka dib markuu Hotel Guled agtiisa ku dilay nin ganacsade ah.
Wuxuu sheegay Yego inay hayaan dukumentiyo muhiim ah oy ka mid yihiin baasabooro itobiyaan ah iyo meelihii ayteleefoonada kula xidhiidheen oo muujinaya inay jiraan dad la shaqaynayay oo ka tirsan sirdoonka gobolka Somalida ee Itobiya oo kasoo galiyay dalka xadka Moyale iyo Mandhera iyagoo hadafkoodu uu yahay inay dad soo laayaan ay ku tuhunsan yihiin inay ka tirsan yihiin ururada kasoo horjeeda Itobiya iyo inay abuuraan qalalaaso qabiil.
“Baasabuurka uu watay ninka dilka gaystay ee lagu xidhay Gaarisa muddo yar ka dib markuu dilay nin ganacsade ah wuxuu muujinayaa inuu kasoo galay xadka Moyale intaanu usii gudbin Nairobi, meeshaa oon aaminsanahay inuu kula kulmay dad kale, intaanu usoo ambabixin Garisa suu falkan uga fuliyo.” Sidaa waxaa sheegay taliyeha CID-da mudane Musa Yego.
Wuxuu ka codsaday Yego dadweynaha dagan gobolada waqooyi inay feejignaadaan oy iska ilaaliyaan inay soo dhaweeyaan dadka dalalka kale kasoo galaya oy siyaan hoy iyagoon marka hore hubsanin ujeedada ay leeyihiin.
Laba ka mid ah gacan-ku-dhiiglayaasha oo kala Khalif Xassan, 38, iyo Cabdiraxman Cabdi, 40, oo hogaaminayay laba koox ayaa ka mid ah dadka u xidhan booliska Gaarisa.
Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Dibadda ee JWXO mudane Cabdiraxman Sheekh Mahdi oo teleefoonka ay ku wareysatay shabakadda Xinua ayaa ku eedeeyay dilka ka dhacay Gaarisa inay ka dambeeyeen sirdoonka Itobiya oo u badalay taaktiigii dagaalka ay kula jiraan ururka wadaan inay falal dambiyeedkan ka fuliyaan dal saaxiib la’ah say u qiimi dilaan.
“Waxay doonayaan inay dilal ka fuliyaan Kenya gudaheeda ka dibna nugu eedeeyaan, si dawladda Kenya oo magangalyo siisay kumanaanka qaxootiga Ogadenya ah ay colaad ugu qaado dadkanaga.” Ayuu yidhi mudane Madey.
Warkan waxaan kasoo xiganay shabakadda Xinua.